ကိုယ်တော်နှင့် လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိပါသလား။ | Rev.U Min Lwin
ကိုယ်တော်နှင့် လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိပါသလား။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 15/04/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္, ေဆာင္းပါး.	Tagged: ယံုၾကည္ျခင္း.	Leaveacomment
ကျမ်းပိုဒ် = မာကု ၅း၂၁-၄၃ ကို ဖတ်ပါ။
၂၁ ယရှုသည် ကမ်းတဘက်သို့ ကူးပြန်၍ အိုင်နားမှာရှိတော်မူစဉ်၊ များစွာသော လူအပေါင်း တို့သည် အထံတော်၌ စုဝေးကြ၏။ ၂၂ ထိုအခါ ယာဣရု အမည်ရှိသော တရားစရပ်မှူးသည် လာ၍ ကိုယ်တော်ကို မြင်လျှင်၊ ခြေတော်ရင်း၌ ပြပ်ဝပ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်၏ သမီးငယ်သေ လုပါပြီ။ ၂၃ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ကြွ၍ သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှါ သူ၏အပေါ်၌ လက်ကို တင်တော်မူလျှင် အသက်ရှင် ပါလိမ့်မည်ဟု များစွာ တောင်းပန်၏။ ၂၄ ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူသွား၍ များစွာသော လူအပေါင်း တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ခြံရံလျက် ထိခိုက် တိုက်မိကြ၏။
၂၅ ထိုအခါ တဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံး သွေးသွန်အနာစွဲသောကြောင့်၊ ၂၆ များစွာသော ဆေးသမားတို့ လက်၌ အလွန်ခံရ၍၊ ဥစ္စာ ရှိသမျှ ကုန်သော်လည်း သက်သာ မရသည်သာမက၊ အနာ တိုးသော မိန်းမ တယောက်သည်၊ ၂၇ ယေရှု၏ သိတင်းတော်ကို ကြားသည် ရှိသော်၊ ၂၈ ငါသည် အဝတ်တော် ကိုသာတို့လျှင် ချမ်းသာရမည်ဟု ဆိုသည်နှင့်၊ လူအစု အဝေးထဲ၌ နောက်တော်သို့ လာ၍ အဝတ်တော်ကို တို့လေ၏။ ၂၉ ထိုခဏခြင်းတွင် အသွေး စုဝေးရာ ခမ်းချောက်သည် ဖြစ်၍၊ ထိုရောဂါ နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ပြီဟု မိမိကိုယ်၌ သိလေ၏။ ၃ဝ ယေရှုသည် မိမိကိုယ်မှ တန်ခိုးထွက်သည်ကို ချက်ခြင်း သိတော်မူလျှင်၊ လူအစုအဝေး၌ နောက်သို့ လှည့်၍၊ ငါ့အဝတ်ကို အဘယ်သူ တို့သနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ ၃၁ တပည့် တော်တို့က၊ လူအစု အဝေးသည် ကိုယ်တော်အား ထိခိုက် ကြသည်ကို မြင်လျက်ပင်၊ ငါ့ကို အဘယ်သူ တို့သနည်းဟု မေးတော် မူပါသည် တကားဟု လျှောက်ကြ သော်လည်း၊ ၃၂ ကိုယ်တော်သည် ထိုသို့ ပြုသောသူကို မြင်ခြင်းငှါ ပတ်လည်သို့ ကြည်ရှုတော်မူ၏။ ၃၃ ထိုမိန်းမသည် ကိုယ်၌ အဘယ်သို့ ဖြစ်သည်ကို သိသောကြောင့် ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်လျက် အထံတော်သို့ လာပြီးလျှင်၊ ပြပ်ဝပ်၍ အထိုအကြောင်း ရှိသမျှကို အဟုတ်အမှန် ကြားလျှောက် လေ၏။ ၃၄ ကိုယ်တော် ကလည်း၊ ငါ့သမီး၊ သင်၏ ယုံကြည် ခြင်းသည် သင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာ သွားလော့။ ရောဂါ နှိပ်စက် ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။
၃၅ ထိုသို့ မိန့်တော် မူစဉ်တွင် တရားစရပ်မှူးအိမ်မှ လူလာ၍၊ ကိုယ်တော်၏ သမီးသေပါပြီ။ အဘယ်ကြောင့် ဆရာ ကိုနှောင့်ရှက် သေးသနည်း ဟု ဆိုကြ၏။ ၃၆ ထိုစကားကို ယေရှုသည်ကြားလျှင်၊ မကြောက်ကြနှင့်။ ယုံကြည်ခြင်း စိတ်တခုသာ ရှိစေလော့ဟု တရားစရပ်မှူး အား ချက်ခြင်း မိန့်တော်မူ၏။ ၃၇ ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်၏ညီ ယောဟန်မှတပါး အဘယ်သူကိုမျှ မလိုက်စေဘဲ၊ ၃၈ တရားစရပ်မှူး အိမ်သို့ရောက်၍ အုန်းအုန်း သဲသဲပြုကြသည်ကို၎င်း၊ အလွန် ငိုကြွေး မြည်တမ်းသော သူတို့ကို၎င်း၊ မြင်တော်မူလျှင်၊ ၃၉ အတွင်းသို့ဝင်၍ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် အုန်းအုန်းသဲသဲပြု၍ ငိုကြွေးကြသနည်း။ သူငယ်သေသည်မဟုတ် အိပ်ပျော်သည် ဟု မိန့်တော်မူသော်၊ ၄ဝ ထိုသူတို့သည် ပြက်ယယ်ပြုကြ၏။ ထိုသူ ရှိသမျှတို့ကို ပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှ သူငယ်၏ မိဘတို့ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် ပါသောသူတို့ကို၎င်း ခေါ်ပြီးလျှင်၊ သူငယ်လျောင်းရာ အရပ်သို့ဝင်၍၊ ၄၁ သူငယ်၏ လက်ကို ကိုင်တော် မူလျက်၊ တလိသကုမိဟု မိန့်တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ မိန်းမငယ် ထလော့ ငါဆို၏ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ၄၂ ထိုခဏခြင်းတွင် မိန်းမငယ်သည် ထ၍ လှမ်းသွား၏။ သူသည် တဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိ၏။ ထိုသူတို့သည် အလွန် မိန်းမောတွေဝေခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ၄၃ ထိုအမှုအရာကို အဘယ်သူမျှ မသိစေမည် အကြောင်း၊ ထိုသူတို့ကို ကျပ်တည်းစွာပညတ်တော်မူ၍၊ သူ့အား စားစရာ ပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (မာကု ၅း၂၁-၄၃)
ဤတရား ဟောချက်ထဲတွင် စိန်ခေါ်မှုများအတူ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကျမ်းပိုဒ်များ ပါဝင် နေပါသည်။ ဤအထဲတွင် မတူညီ သီးခြားစီ ရပ်တည် နေကြသော အဖြစ်အပျက် နှစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအဖြစ် အပျက် နှစ်ခုသည် တစ်နေရာ တည်းတွင် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြုံ ကြရလေသည်။ ထိုနှစ်ခု အကြားတွင် သခင် ယေရှုနှင့် တွေ့ကြုံ ဆက်နွှယ်နေသည့် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းသွားပါမည်။
ပထမဦးစွာ ယာဣရုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ သူသည် တရားဇရပ်မှူး တယောက် ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ လူမျိုးစုများအကြားတွင် အလွန် အလုပ်များပြီး အလွန် ကြီးမား များပြားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင် နေရသည်။ နှုတ်ခပတ်တော်ကို ယုံကြည် လေးစား အားကိုးသော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အမှုတော် အတွက် မိမိ အသက်တာကို ဆက်ကပ် ထားသော ယုံကြည်သူ တဦးဖြစ် ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ထာဝရ ဘုရားကို ယုံကြည် ကိုးစားသောသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် နေ့တိုင်းအစဉ် တပါးသူများ၏ ပြဿနာများကို ကူညီ နေရသူ တစ်ဥိး ဖြစ်ပါသည်။ တရား ဇရပ်တွင် နာမကျန်းသူများ၊ မေတ္တာ ငတ်နေသူများဖြင့် အလုပ် ရှုပ်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြဿနာရှိသူ၊ ဒုက္ခ ခံစားနေရသူများအကြားတွင် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ရန် ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်ထားသည်။ အမှုတော် ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်တွင်လည်း ဧည်သည်များနှင့် အမြဲ ပြည့်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဤမျှ လေးစားစရာ ကောင်းသော အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ယာဣရုသည် သူကိုယ်တိုင် ပြဿနာ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရ လေတော့သည်။ သူတပါး ကျန်းမာလာဘို့ ဆုတောင်းပေး ရလေ့ ရှိသော အမှုတော် ဆောင်ကြီး ယာဣရုသည် သမီးဖြစ်သူ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားမှုကို တွေ့ကြုံ ခံစားလာရသည်။ ဘခင် တစ်ဦး အနေဖြင့် မည်သို့မျှ ဖြေသိမ့်၍ မရနိုင်ပါ။ အလွန် ငယ်ရွယ်သေးသည့် သမီးငယ်တွင် ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်တမ်း အရ မကြာမီ သေဆုံးရတော့မည်။ တတ်နိုင် သလောက် ကြိုးစား ကုသ ခဲ့သော်လည်း ဆရာဝန် ၏ နောက်ဆုံး အဖြေကြောင့် တုန်လှုပ် ချောက်ခြား ရပါတော့သည်။ မိဘ အချို့တို့သည် ဤကဲ့သို့ အခြေအနေ တွေ့ကြုံ လာပါက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ကာ စိတ်ခံစားမှု များပြားလွန်းသဖြင့် ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေလေ့ ရှိကြသည် မဟုတ်ပါလား။ အချို့က ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်မည်။ တချို့က မိမိကိုယ်ကို မိမိ အပြစ် တင်မည်။ မည်မျှ ကြီးမားသော စိတ်ခံစားမှု များနှင့် နဘမ်းလုံး နေမည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ထဲတွင် မြင်ယောင် ကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို လမ်းပြလိုက်သည်။ သူသည် တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရ မိလိုက်သည်။ တရားဇရပ်တွင် ဂျူးလူမျိုး ယုံကြည်သူများ အကြား ပြောဆိုနေသော လူငယ် တရားဟော ဆ၇ာ လေးလား၊ ပရောဖတ်လားမသိ။ ထိုတစ်ယောက်ကို သတိရ လိုက်သည်။ ထိုယေရှု ဆိုသော လူငယ် လေးသည် တရား ဇရပ်များတွင် ရဲဝင့်စွာ တရား ဒေသနာများ ဟောပြော နေဟု ကြားနေရသည်။ အချို့ မြို့များတွင် တရားဟောသ ည့်အခါ တစ်မြို့လုံး ကုန်မတတ် သွားကြသည်ကို ကြားဘူးသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုလူငယ်လေး သည် ကျန်းမာခြင်းကို ပေးကြောင်း ကြားသိနေရသည်။ သူ့အားဖြင့် ကျန်းမာ သွားကြသော လူများ အလွန်များ ပြားလှကြောင်း ကြားသိဘူးပါသည်။
ယေရှုသည် မွေးကတည်းကပင် ခြေလက် သေနေသူများကို အကောင်း ပကတိ ပြန်လည် ဖြစ်စေသည်။ သင်းချိုင်းမှာ နတ်ဆိုးစွဲနေသော သူကိုလည်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေသည်။ မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်း ရေကို စပျစ်ရည်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကြားသိ သလောက် ပြန်လည် သုံးသပ် ရသော် သေအံ့ ဆဲဆဲ ဖြစ်သော သမီး အတွက် ကူညီနိုင်သောသူ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တရားဇရပ်မှူး သိလာခဲ့သည်မှာ ဤမြို့ကလေးသို့ သခင်ရောက်လာမည်။ သူကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပင့်ဖိတ်လိုက်မည်ဟု ပြင်ဆင်နေပါသည်။
သခင်ယေရှုသည် လှေပေါ်မှ ဆင်းလျှင် များပြား လှသော လူအုပ်ကြီးသည် ကိုယ်တော်ကို စောင့်နေ လျှက် ရှိပါသည်။ ကျမ်းစာ ထဲတွင် အလွန် များပြား သော လူအုပ်ကြီးဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျမ်းစာ ထဲတွင် သခင်ယေရှု အနားသို့ ယာဣရု ရောက်ရှိနေပါပြီ။ လူအုပ်ကြီးသည် ကိုယ်တော်၏ အနားတွင် တိုးကြိတ် လျှက် ရှိပါသည်။ သူသည် ကိုယ်တော် သခင်ယေရှုထံ ၀င်ရောက်ကာ “သခင် အားပါသလား၊ အားလျှင် ကျွန်တော်၏ အိမ်သို့ ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်ပေးပါ။” စသည်ဖြင့် မေးမြန် ခြင်းမပြုတော့ဘဲ အိမ်သို့ လိုက်လာပါရန် အတင်း တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ဘခင်ဖြစ်သော တရားဇရပ်မှူးက မည်မျှပင် ခေါ်ဖိတ်နေပါစေ၊ ကိုယ်တော်သည် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်း ကိုတော့ စမ်းသပ် လိုပါသေးသည်။ သူ၏ တောင်းဆိုမှုကို ကိုယ်တော်က မည်သို့မျှ ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှု မပြူခဲ့ချေ။ သို့သော် သူခေါ်ရာသို့ ချက်ချင်း လိုက်ပါ ခဲ့ကြောင်း ကျမ်းစာတော် မြတ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ သခင် ယေရှုသည် ဘခင်၏က တောင်းဆို လွန်းအား ကြီးသောကြောင့် လိုက်လာ ခဲ့သည့်တိုင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်း ကို မည်သို့မျှ မှတ်တမ်းတင် ထားခြင်း မရှိချေ။ ကျမ်းစာကို ပြန်လည် လေ့လာ ကြည့်ပါ။ အခန်းငယ် (၂၄)တွင် “ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူ သွား၍…..” ဟူသော အသုံးအနှုံးကို တွေ့ရပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်း၏ ဆိုး၏ မည်သို့မျှ ပြန်လည်တုန်ပြန်မှု မပြုဘဲ ချက်ခြင်းလိုက်လာခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ ရပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ရောဂါသည် အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် လှို့ဝှက်စွာ လာ၍ ကိုယ်တော်၏ အ၀တ်တော်ကို တို့ထိ လိုက်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိ လိုက်သည် ဟု သမ္မာကျမ်းစာ တွင် အတိအလင်း ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ သခင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်ကြည့် ပြီးနောက် တရားခံကို ရှာဖွေ လိုက်သည်။ မေးခွန်း တစ်ခု မေးလိုက်သည်မှာ “ငါ့ကို ဘယ်သူ ထိသနည်း”။ တပည့်တော်များက အလွန် များပြားသော လူအုပ်ကြီး၏ တိုးဝှေ့ နေမှုကို တွေ့မြင်ပါလျှက်နှင့် ယခုကဲ့ သို့ မေးမြန်လာသော မေးခွန်းကို ကျေနပ် အားရပုံ မရကြချေ။ သို့သော် ကိုယ်တော်က ပြန်လည် ပြောဆိုလိုက် သည်မှာ “မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုယ်က တန်ခိုးထွက်တယ်” ဟူ၍ ပြန်လည် တုန့််ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ယခု ဖခင်တဦး၏ ခံစားချက်ကို တခါပြန်လည်ကြည့်ကြပါဦးစို့။ သူသည် မိမိ၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး သေမင်းတံခါးဝသို့ ရောက်ခါနီး ဆဲဆဲတွင် ကြံရာမရ စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်ကာ သခင် ယေရှုထံ သို့ အတင်း လူအုပ်ကြီးကို ဖြတ်ပြီး တောင်းပန်မှုပြုခဲ့ရသည်။ သူသည် ကိုယ်တော်ကို အလျှင်အမြန် အိမ်သို့ ခေါ် သွားချင်သည်။ ခဏလေးတောင်မှ အချိန် မဖြုန်းချင်ပါ။ အိမ်ကို မြန်မြန်ရောက်ဘို့ လိုသည်။ သမီးလေး အသက် မသေမီ ကိုယ်တော်က ကြိုတင်ရောက်မှ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သမီးလေး၏ အခြေအနေမှာ အချိန်မရွေး သေဆုံး သွားနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် လမ်းခရီးတွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ရောက်လာကာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိသည်ဟု ဆိုကာ သခင်ထံမှ သခင်၏ စွမ်းရည်များကို တိတ်တခိုး ယူဆောင်လေသည်။ ထိုသို့ သူမ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ကိုယ်တော်ကလည်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက်နေပုံ ရပါသည်။ ထိုအရာများ အားလုံးကို ယာဣရု မြင်တွေ့နေရပါသည်။ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပါ။ သူ့ကိစ္စက ပိုအရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလော။ စိတ်ထဲတွင် တွေးနေသောအရာ များစွာ ရှိနေပေလိမ့်မည်။ လမ်းခရီးတွင် ကြန့်ကြာနေရသည်ကို စိတ်မရှည်နိုင် ဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကြန့်ကြာ နေခြင်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထင်မြင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ထံတွင် ထိုကဲ့သို့ ကြန့်ကြာမှု များအတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းစရာများ ရှိနေပါသည်။ ထိုကြန့်ကြာမှုထဲတွင် သင်ယူစရာပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ရာထူးတတ်ဘို့ တစ်စုံတစ်ခုသော အချိန်ကို စောင့်ရသည် မဟုတ်လော။ ကျန်းမာ ခြင်းဆိုတာကို ရနိုင်ဘို့ တစ်စုံတစ်ရာသော အချိန်ကို စောင့်ရသည် မဟုတ်ပါလော။ ပြဿနာတွေ ပြေလည်ဘုိ့ ကာလ အချိန်တစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းရသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုကဲ့သို့ စောင့်ဆိုင်းရသည့် (နှောင့်နှေး နေရသည့်) အချိန် ကြုံလာတိုင်း မိမိ၏ အခြေအနေ များကို ပြန်လည် သုံးသပ် ရနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။ လူတို့၏ စိတ်သဘော အရ ပြဿနာ၊ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့လာပါက အလျှင်အမြန် ပြေလည်ချင်သည်။ ထိုသို့ မပြေလည် သည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် လုံလောက်လျှက် ရှိပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ စောင့်ဆိုင်း နေရသော ယာဣရု၏ ဘ၀ထဲတွင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို တစ်ဆင့် မြင့်လာ နိုင်မည့် အခြေအနေကို တွေ့ကြုံခွင့် ရပါသည်။ သူ၏ ပုံမှန် ဖြစ်ရမည့် အစီအစဉ်ထဲတွင် တစ်ဆယ် နှစ်နှစ် ပတ်လုံး သွေးသွန် ရောဂါစွဲနေသည့် မိန်းမက ၀င်ရောက် နေရာ ယူသွားသည်။ ထိုမိန်းမသည် ငွေကုန်ပြီး ဆေးသမားစုံ နေသော်လည်း ရောဂါက ပျောက်ကင်းသွားခြင်း မရှိချေ။ ကျမ်းစာကပြောသည်မှာ ရောဂါ ပိုဆိုးလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် တန်ဘိုးရှိလှသော အချိန်များကို သေအံ့ ဆဲဆဲ ဖြစ်သော သမီးဖြစ် သူအတွက် အသုံးပြုရမည့်အစား ပညတ်တော်အရ အပြစ်ရှိပြီး ပယ်ထားရမည့် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အတွက် အသုံးပြုနေသည်။
• ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို အားနာမှု လုံးဝမရှိကြောင်း သက်သေပြလျှက် ရှိပါသည်။
• ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၊ အရာရှိများကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်စေရန် ကြည့်ရှုသည်။ ဂရုစိုက်သည်။
• ကိုယ်တော်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အပယ်ခံများကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လာစေရန် ကြည့်ရှုသည်။ ဂရုစိုက်သည်။
• ကိုယ်တော်သည် ယာဣရု၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း တုန့်ပြန်မှုပြုသလို၊ ဆင်းရဲသား အပယ်ခံ မိန်းမတစ်ဦး၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။
• ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူများ သက်သက်ကိုသာမကြည်ဘဲ အခြေအနေအားလုံး အတွက် ကြည်ရှုပေးသည်မှာ သေချာလေသည်။
• လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိသောသူတိုင်းကို ရှာဖွေ ကြည့်ရှု ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ယာဣရုအကြောင်း ဆက်လက် ကြည့်ကြပါစို။ သူသည် အလွန် ၀မ်းမြောက်ခြင်း ခံစားနေရမည်မှာ သေချာ ပါသည်။ သူအားကိုး မြှော်လင့် ယုံကြည်သော ခရစ်တော်၏ အစွမ်းအစကို မြင်သောအခါ အလွန်အားရ ကျေနပ်လျှက် ရှိသည်။ သူ၏ ၀ိညာဉ်သည် လေထဲမှာ ၀ဲလွှင့် ပျံသန်းနေသယောင် ပေါ့ပါး လန်းဆန်း နေလိမ့်မည်။ သူ့ကိုယ် သူလည်း သခင်၏ ကျန်မာခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သက်သေခံလျှက် ရှိနေသည် ဟုခံစားပါသည်။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ ကျန်မာရေး အတွက် စိတ်ချမှု အပြည့် ရှိသွားပါပြီး။ သို့သော် စာတန်သည် သတင်းကောင်း အတွက် ၀မ်းမြောက်လျှက် ရှိသောသူတို့ကို ကြာကြာ ၀မ်းမြောက်နိုင်သော အခွင့် မပေးခဲ့ချေ။ သတင်းစကား တစ်ခု ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသတင်း စကားကြောင့် ကျောက်တုံကဲ့သို့ ခိုင်ခန့်နေသော သူ၏ ကမ္ဘာလေးသည် ရုတ်တရက် ဆပ်ပြာ ဘူဘောင်းလေးပမာ လွှင့်စင် ပျောက်ပျက် သွားခဲ့လေသည်။
ထိုသတင်း စကားမှာ “ကိုယ်တော်၏ သမီး သေဆုံး သွားပါပြီး။ သခင့်ကို ဒုက္ခ မပေးပါနဲ့တော့။” ထိုသတင်း စကားကို သခင်ယေရှု ကိုယ်တိုင်လည်း ကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ တုန်လှုပ် ချောက်ခြားနေသော ဘခင်ဘက်သို့ လှည်ပြီးနောက် ရုတ်တရက် ပြောလိုက်သော စကားသည်ကား “မကြောက်ပါနဲ။ ယုံကြည်ခြင်း တခုသာ ရှိပါလော့” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လုံးဝ မတုန်လှုပ်ပါနှင့်။” ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကား ကို သခင်ယေရှုသည် သတင်းဆိုးကို ရုတ်တရက် ကြားလိုက်သည့် ခဏခြင်းတွင် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သမ္မာ ကျမ်းစာက ပြောဆိုထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မကောင်းသော သတင်းတစ်စုံ တစ်ရာကို ကြားပြီ ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း သည် အမြဲတမ်း ကျဆင်း သွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အနည်းငယ် မျှပင် လျော့နည်းရန် အလိုတော် မရှိချေ။ သတင်းဆိုး ကြားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကိုယ်တော်သည် ချက်ခြင်း တုန့်ပြန် လိုက်သည်မှာ “မကြောက်နှင့်။ ယုံကြည်ခြင်း တခုသာ ရှိစေလော့။” ဟူ၍ ချက်ခြင်း တုန့်ပြန် ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းဆိုးကြားသည်နှင့် တပြိုင်နက် နှုတ်ခပတ်တော်က ဘာပြောသလဲ ဆိုသည်ကို ချက်ခြင်း ရှာဖွေဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားသည့် အမြင့်ဆုံး အနေအထားတွင် သခင် ယေရှုထံမှ နှုတ်ခပတ်တော် အားဖြင့် ခွန်အား ယူကြမည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ သခင် ယေရှုထံတွင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ၀မ်းမြောက်စရာ သတင်းစကားနှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်း စကားများ ရှိနေပါသည်။
ယာဣရု အနေဖြင့် သခင်ယေရှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခံစားမိသော ယုံကြည်ခြင်းတရား အချို့ ရှိနေပါ သည်။ သေခြင်းတရား ဆိုသည်မှာ ဖျားနာခြင်း ဆိုသောအရာထက် ပိုမို စိမ်ခေါ်နေသော အချက် တချက် မဟုတ်ချေ။ သခင့်ထံတွင် တန်ခိုးရှိနေသည် ဆိုခြင်းကြောင့် ထွက်ခွာသွားသော အသက်ကိုလည်း ပြန်လည် ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ယုံပါသည်။ သခင့်ထံတွင် ထိုအစွမ်းတန်ခိုးများ ရှိနေသည် မိမိ၏ သမီးကို ပြန်လည် အသက် ရှင် စေမည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “မတုန်လှုပ်ပါနှင့်” ဟု ပြောလာသော စကားကို ယုံကြည်သည်။ ထိုစကား ကို ယာဣရုက ယုံကြည်သည့် နည်းတူ သင့်ကိုလည်း ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ပြဿနာ အသီးအသီးတွင် သူနှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် တောင်းဆိုနေပါသည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။”
ဤနှုတ်ခပတ်တော် ဆင်ခြင်မှုအရ ကျွန်ုပ်တို့ကို သခင်က မေးနေသည်မှာ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။”။ ယာဣရု၏ နှလုံးသားနှင့် စိတ်ခံစားမှုများကို သတင်းဆိုး မကြားမီကပင် ကြီးမားသော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တို့ထိ ခံစားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ် ဖြစ် ပျက်လာမည့် အရာတို့အတွက် ကြိုတင် ခံစား ယုံကြည်ပြီး ဖြစ်ပေတော့မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရမည့်အချက်တခုမှာ သခင်ယေရှုသည် မည့်သည့်အခါမျှ ဈာပန အစီအစဉ်များကို မပြုလုပ်ခဲ့ချေ။ သခင်ယေရှု၏ အစီအစဉ် ဇယား ထဲတွင် သေခြင်းဆိုသည်မှာ မရှိချေ။ ယခု ယာဣရု၏ အိမ်သို့ သွားရောက်သည့် အစီအစဉ်သည် ဈာပန အစီအစဉ် ပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ထားပါ။ ဖခင် ကိုယ်တိုင်လည်း သိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ သခင် အိမ်သို့ လိုက်လာခဲ့ခြင်းမျာ အသုဘ အစီအစဉ် ပြုလုပ်ရန် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနေပါသည်။
ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းနေသ၍ “ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်နှောင်းသွားပြီ” “နောက်ကျသွားပြီ” “လွန်သွားပြီ” ဆိုသည့် စကားလုံးများ မရှိပါ။ ယာဣရု ကြားသိရသော သတင်းစကားသည် သတင်းဆိုး ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အတွက် အဆိုးထဲတွင် အကောင်းများ အစဉ်လွှမ်းမိုးလျက် ရှိသည်။ ကိုယ်တော်သည် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် တတ်နိုင်သော အရှင်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ ကိုယ်တော်သည် ယာဣရု၏ အိမ်သို့ ရောက်သောအခါ သေဆုံးသွားသော သမီးငယ်၏ အခန်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ သမီးငယ်၏ လက်ကို ဆွဲကိုင်လျှက် “မိန်းမငယ်၊ ထလော့” ဆိုသည်နှင့် သေဆုံးနေသော မိန်းမငယ်လေးသည် ပြန်လည်ထမြောက်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။ ယာဣရုသည် ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက် မည်မျှ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်နေပါမည်နည်း။
သင်၏ ဘ၀ အသက်ရှင်မှု ထဲတွင် ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ရယူ ခံစားနိုင်ပါသည်။ ယာဣရုသည် ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာများကို ပြန်လည် စဉ်စားကြည့်လိုက်တိုင်း ကျေနပ်အားရ ၀မ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားရပေ လိမ့်မည်။ မည်မျှပင် ပြဿနာ ဆိုးရွား ကြီးထွားနေစေကာမူ ကိုယ်တော်နှင့် လျှောက်လှမ်းလိုသော စိတ်နှလုံး အပြည့်အ၀ ရှိနေပါသည်။ ထိုစိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းလိုသည့် ယုံကြည်ခြင်း ပင်ဖြစ် သည်။ ယာဣရုတွင် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မေးပါရစေ။ သင့်မှာ ကိုယ်တော် နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။ သခင်ယေရှုက သင့်ကို မေးနေပါသည်။ ယနေ့ပင် အဖြေပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိပါသလား။
← ဘုရားသခင်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပျံသန်းခြင်း
Rev. Dr. ဦးတင်မောင်ထွန်း၏ တရားဟောချက်များ →